Abesifazane asebeyibambe iminyaka ematekisini sebevuse elinye ibhizinisi kule mboni. Omunye wabo uxoxe noTEBOGO MOKWENA - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
ONkk uJoyce Hlobo, uJoyce Nkosi noMavis Ndlela, abanikazi beHow Long Services, eyenza izihlalo zamatekisi eThekwini, KwaZulu-Natali
Abesifazane asebeyibambe iminyaka ematekisini sebevuse elinye ibhizinisi kule mboni. Omunye wabo uxoxe noTEBOGO MOKWENA
ESIKHUNDLENI sokushiya phansi ebhizinisini lamatekisi ngenxa yenkinga yezimali edalwe wukubheduka kwegciwane iCOVID-19, omama asebeneminyaka beku leli bhizinisi baqhamuke necebo elisha.
ONkk uJoyce Hlobo, uJoyce Nkosi noMavis Ndlela, abangabanikazi bamatekisi asebeyibambe iminyaka kuleli bhizinisi benze okungajwayelekile beqala ibhizinisi lokuhlanza izihlalo nengaphakathi lamatekisi nezimoto okumanje liyachuma.
UNkk uHlobo, okuwuyena ochaze kabanzi ngaleli bhizinisi labo elibizwa ngeHow Long Services, uthi ukuba namava kulo mkhakha asebe kuwona iminyaka engaphezu kuka-20 nokwazana nabantu kule ndima kungezinye zezinto ezenze bakwazi ukuqala leli bhizinisi.
Uthi baphinde basizwa kakhulu wuMnu uYusuf Khalifa, usihlalo weSouth and North Beach Taxi Association nomlingani ematekisini, yibona ababe neqhaza elikhulu ekuphumeleleni kombono wabo.
UMnu uYusuf Khalifa, usihlalo weSouth and North Beach Taxi, ngenye yamadoda eseka osomatekisi besifazane
“Kusukela kubheduke iCOVID-19 inzuzo yethu yehle kakhulu kangangokuthi besingasakwazi nokukhokhela izindleko zezimoto. Abanye bethu balahlekelwa izimoto, sasesinquma ukuqala leli bhizinisi lokuhlanza amatekisi ngoba yimboni yethu lona,” kuchaza yena.
Uthi bahlanza amatekisi ohlobo loSiyaya, iHiAce neQuantum kanti abagcini lapho futhi njengoba babuye bahlanze izimoto ezincane, bapheshe izihlalo zazo, bahlanze itekisi phansi nengaphakathi lalo noma lemoto.
Labo somabhizinisi sebeqashe abahlanzi bezimoto ababili, uNkk uHlobo abancome kakhulu ngokubasiza ukuqhuba umsebenzi.
“Sinanezisebenzi ezimbili ezinobuchule bokwenza lo msebenzi futhi eziwenza ngendlela esezingeni eliphezulu. Saziqasha ngoba sasifuna ukuthi kube khona ezikwenzayo futhi zikwazi nokondla imindeni yazo,” kuqhuba uNkk uHlobo.
Uthi imvamisa benza amatekisi ayishumi ngesonto, okuthi uma kwenzeka kuba nendlala yamakhasimende basebenzise ezinye izindlela ukulimaketha ukuze ibhizinisi labo lingafadabali.
“Uma kwenzeka kuze kuphele amahora amathathu noma amane singatholi khasimende, siqhamuka necebo. Siyaye sibize abangani bethu nabalingani bethu sizobahlanzela izimoto ukuze bakwazi ukuxhasa. Impela bayasilalela ngoba baze basicele nokuthi sizobahlanzela izimoto zabo emakwabo,” kusho yena.
Uthi bafunde okuningi emadodeni akuleli bhizinisi ngokwenza inzuzo, ukusebenzisa imali, ukuyibeka nokuyiphatha.
“Mina nje ngafunda ukuthi awukwazi ukuvele ubhubhudle imali nje noma yikanjani, ngaloko ngakwazi ukuthenga umuzi, imoto, ngafundisa nezingane zami,” kusho uNkk uHlobo.
Utuse uMnu uKhalifa ngokuba ngomunye wabantu abenze sanda isibalo sabesifazane asebengabashayeli nabanikazi bamatekisi manje.
“Siqhakambisa yena kakhulu ngoba weseka ukulingana kwamalungelo kwabesilisa nabesifazane futhi akathandi ukubona abesifazane bethwala kanzima. Usizo lwabantu abafana naye lusikhombise ukuthi uma abesifazane nabesilisa bengasenzisana kuningi okungazuzwa ngokuhlanganyela,” kuphetha uNkk uHlobo.